कालीगण्डकीमा रोमाञ्चकारी जलयात्राको मज्जा लिने कि ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperकालीगण्डकीमा रोमाञ्चकारी जलयात्राको मज्जा लिने कि ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
तानसेन, ६ माघ । पाल्पामा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले पर्यटन महोत्सव हुने भएको छ । नेपाल पर्यटन भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउनका अगामी फागुनको २४ गतेदेखि महोत्सव आयोजना गरिने रामपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख अध्यक्ष रमणबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।